Last updated: Chivabvu. 28 2018 | 2 Maminitsi verenga
Hapana akakwana. Saizvozvo, kudanana raisazova zvikuru zvakawanda kunonakidza kana vose vaiva. zvisinei, pane nzira dzinogona kukanganisa kudanana ruzivo. The pazasi Mazano ndivo zvikanganiso yakanyangara kuti vakadzi havafaniri kuita kana kudanana.
Kuva Too Available
Kutanga dzakawanda kuonana uye pakarepo kuteerera chero tsamba kubva kwaari zvose zviratidzo vanoti wakanyanya kuwanika. Varume kutsvaka vakadzi nechivimbo uye akazvimirira vari aida nevamwe. Kunyange zvazvo ungave mwoyo kana uchida kuratidza kufarira Guy yako, kungokurumidza iripo achauya kuyambuka Vapererwa.
Self-Absorção de Água
Mumwe nomumwe anoda yakazvimirira mukadzi kodzero?! zvisinei, kana uri newewo “mu-kuti” pachako, richashandurwa varume kure. Zvakakosha kupedza nguva kutaura zuva renyu uye ake nazvo uye zvido uyewo kugoverana zvako.
Kuramba Kuva On Phone Your
Uri musi kuziva zvaunokwanisa Mr. Right uye vakutarisire. Kuramba ari pafoni wako akakuitira somunhu asingadi kudanana foni yako, anoda akuzive. Iva nechokwadi chokuti foni yako haisi chete muhomwe yako yose musi asiwo nechokwadi chokuti zviri pamusoro akanyarara.
Nguva dziri kushanduka uye kupa kuripira pazuva rokutanga musi kuri kuva mutemo. Nepo tsama ravanhu kuomerera kubhadhara, vazhinji vachaitwa mwoyo kana musingadi kupa chinenge akatsemura bhiri.
Nepo kuva chokunwa kana maviri musi asingambochinji yakanaka, vachinwa rakawandisa kana kudhakwa musi kunyange achava iye achimhanya upenyu hwake. Haangorina iyi inoratidza kuti hausati wagadzirira kuti ukama chakakura asi kazhinji kunwa yakawandisa zvinoisa angangokuvadza vachiti chinhu unogona kudemba.
Betting rudo rwenyu upenyu pamusoro mukomana kuitwa chinhu tikundikane njodzi. Kudanana munhu akarurama nokuti anokwezva kana ane mari apo kuedza kuchinja vakamutengesa kuva nomukomana wako wakakwana vachachinja chero ukama kupinda munhu akazara kutsamwa.
Varume anoposhwa chose vakadzi vakatendeukira misi pakutanga kunzvimbo pakarepo wave-the-imwe-let's-kuti-kuroorwa. Hakuna nani kunzwa ugozouya musi anoshamisa rokutanga asi vevakadzi, chengeta “Ndinokuda” pfungwa pachako kuti mwedzi yokutanga. Kuwana chakakomba uye manzwiro avo zvakare nokukurumidza achaita yako murume run.
Varume vakawanda munyika ino mhando, zvinoshamisa vanhu vane yakakura mwoyo kudaro…
Hezvino pamusoro zvinhu gumi kuti unofanira kudzivisa kana kunyorera vakadzi paIndaneti.